I-Laser Printers - iSearch
Qala electronics Phrinta & Skena laser
1 Iphrinta ye-Laser njengephrinta ewusizo futhi ukusetshenziswa kwekhaya
2 Indlela iphrinta laser isebenza ngayo
3 Isimiso sokusebenza somshicileli we-laser
4 Umshini we-laser umbala njengedivaysi yama-multifunction
5 Imigomo yokuthenga iphrinta ye-laser
6 Isinqumo ku-printer laser
7 Isivinini sokuphrinta sashicileli entsha laser
8 Ukuxhumana kwephrinta entsha ye-laser
9 Umsebenzi wokuskena
10 Kuphi ukuthenga iphrinta laser ngokufanele?
Iphrinta ye-Laser njengephrinta ewusizo futhi ukusetshenziswa kwekhaya
Ama-copiers atholakalayo namuhla kuwo wonke amahhovisi, onke amandla nakuzincwadi eziningi. Lawa madivayisi amaningi asebenzayo anemisebenzi eminingi, kufaka phakathi ama-laser printer. Lawa maphrinta, asebenza ngokuvumelana nesimiso se-laser manje anesithakazelo kuwe futhi afaneleka ukusetshenziswa kwekhaya. I-Laserprinter manje ibhekwa njengendlela ehlukile yokonga yokushicilela kanye nabakhiqizi abaziwayo njenge-HP, Samsung noma uMfowethane banikeze la madivaysi amasha ngemisebenzi eminingi. Lawa maphrinta ajwayelekile namuhla ezinhlobonhlobo eziningi, ngoba inzuzo yokulondolozwa kwezindleko zokunyathelisa kusobala ngokucacile lapho kuningi okumele kwenziwe khona emnyama / emhlophe. Amaphrinta abasebenzisa isimiso se-laser besebenzisa i-toner ukubonisa izinhlamvu ephepheni ngokucacile banenzuzo yezindleko zeyunithi eziphansi zokunyathelisa. Namuhla futhi kunemibala futhi la madivayisi asanda kusengaphambili. Ngesikhathi nje ucabanga ngokuthenga iphrinta entsha, kufanele uhlolisise la madivayisi futhi usebenzise izinzuzo zalolu buchwepheshe bokunyathelisa. Kukhona umkhiqizo walolu hlobo olulungele wena ngokuphelele, kodwa okokuqala kufanele ubheke incazelo yezobuchwepheshe.
Indlela iphrinta laser isebenza ngayo
Amaphrinta asetshenziselwa ukukhipha idatha, futhi isikhulumi senkampani yenethiwekhi sisebenza njalo ukuze lokhu kwenziwe ngokuphelele. Ku-laserprinters, isimiso se-electrophotography sisetshenzisiwe futhi lokhu kuyinhlobo yezobuchwepheshe eziyinkimbinkimbi kumaphrinta ezinaliti namaphrinta we-inkjet. Umehluko ku-laserprinter ukhona nasenqubo ye-XEROX, iningi lalo liqhathanisa le nqubo ngendwangu ye-laser. Imfihlo yesicelo sezobuchwepheshe yisigubhu esiphendukayo se-static sokubunjwa kwesithombe. I-laser ihlaziya izithombe nezinti ze-toner ngqo lapho ibhondi ye-laser ihlasela umphathi wesithwali. Esikhathini se-laserprinter iphoyinti lokuxhumana livela ngaleso toner, eliholela ekumelelweni okuphakathi. I-laser inikeza ukuphuma kwesimo segubhu ngokusebenzisa ibhande layo lokuthinta endaweni lapho izinhlamvu noma izithombe zivela kamuva. I-toner ye-laserprinter igxile phezu kokushisa kwephepha ne-toner yilezi zinto ezithengwa ngaso sonke isikhathi njengomkhiqizo obhalisiwe wale phrinta. Kodwa-ke, le nqubo ilula kakhulu ngoba amakhadididi e-toner asebenza kakhulu kunama-cartridges ayinayo kakhulu ephrinta ye-inkjet.
Le vidiyo ikukhombisa ukuthi isebenza kanjani: https://www.youtube.com/watch?v=xtiz4hts7JI
Isimiso sokusebenza somshicileli we-laser
Nge-laser, isigubhu sezithombe sikhishwa ngokucacile kumaphoyinti wesithombe kumphakathi wokuthwala. Kule ndawo engagculwanga, i-toner iphuma ngaphandle kwe-cartridge futhi ihlelwe kamuva. Imibala ehlukene ye-toner, iyenziwa ngamakhanjidi afanelekile futhi ukulungiswa kunamathela kakhulu futhi kudokhumenti. Kunezinhlobo ezimbili zama-printers, okuthiwa i-mono lasers kanye ne-laserprinter yombala. Ngokusobala, umsebenzi wemibala uchazwa, iphrinta ye-mono laser ikhiqiza imibala emnyama / emhlophe futhi ipeni laser umbala iyinhlangano ephelele yezithombe nezinye izinhlamvu zembala. Amaphrinta e-Monochrome laser noma amadivayisi we-mono yiyona ndlela elula futhi eyononopha yalezi phrinta. Lezi zici ezilula kepha ezingenasici kakhulu futhi ezinamandla zihambisana nokuhle ngesikhathi sokuthenga. Lapha uzothola amadivaysi angena ezingeni lokungena futhi kufanele uchithe nxazonke ze-60 Euro ngesdivaysi esivele inesipiliyoni esisebenza kahle. Ukuze wenze lokhu, kufanele uhlaziye izindleko zokuthi ukuphrinta okulodwa kubiza ngokuhamba kwesikhathi futhi esikhathini eside uzosindisa inani elikhulu lezindleko zenkinobho yephrinta. Noma kunjalo, la madivayisi afaneleke kuphela uma wazi ukuthi awufuni ukwenza ngaphandle kwemifanekiso emibala.
Nazi izinzuzo ze-mono laser njengendlela yokubuka jikelele:
- izindleko eziphansi zokutshala izimali
- ukunyatheliswa kwezindleko eziphansi
- ukusebenza okuphezulu kakhulu nokunyathelisa
Ukungahambi kwe-mono laserprinter:
- ayikho imibala emibala
Umshini we-laser umbala njengedivaysi yama-multifunction
Umbala we-laserpriners uhlukile kumaphrinta wamapayipi e-monochrome ngokutholakala kwama-cartridges amaningi we-toner eminye imibala. Lapha kufanele uthenge ama-cartridges kamuva embala imibala, i-cyan, emnyama nephuzi. Amadivaysi ombala wombala asuke abizayo kakhulu ukuthenga, kodwa anezinzuzo ezicacile lapho esetshenzisiwe, futhi imiqulu ngayinye ishibhile kunamaprinta e-inkjet ahlukahlukene. Isimiso sobuchwepheshe sifana ncamashi nakumshicileli we-mono laser. Imishini yanamuhla yalolu hlobo ifinyelela ukusebenza kwe-photoprinter ngekhwalithi yokubonisa. Ngaphezu kwalokho, abaningi balaba baphrinta be-laser banikeza ukuskena nokukopisha imisebenzi.
Izinzuzo ezibaluleke kakhulu:
- izinga eliphakeme lokuprinta ngombala
- izindleko eziphansi zama-photoprints
- isivinini sokunyathelisa ngokushesha
Imigomo yokuthenga iphrinta ye-laser
Amadivaysi aphansi namanothi angaphakathi okungena ayatholakala kuwo wonke umenzi walezi phrinta. Abakhiqizi abaziwa kakhulu yi-HP, Canon, Lexmark noMfowethu. Okunye okumele usebenzise ukucabangela isinqumo sakho sokuthenga kusekelwe ebuchwepheshe obuhlinzekwa ngabakhiqizi. Lokhu, isibonelo, mayelana nejubane lokunyathelisa, isinqumo nokuxhuma kumadivayisi aphezulu. Ngaphezu kwalokho, kufanele ucabange ukuthenga umsebenzi ofanayo wokukhipha kanye nokukopisha umsebenzi, kanye nezinketho zefeksi, uma ufaka imali yemprinta laser noma kunjalo. Ngale ndlela, ungathola ngokuphrinta iphrinta yakho ye-laser ukusetshenziswa kwekhaya, okukusiza ukuthi udale imiphumela engcono yephrinta futhi ulondoloze izindleko ze-cartridges eyinki ebiza kakhulu.
Isinqumo ku-printer laser
Uma iphrinta laser ishicilelwe, inani elifanele likutshela ukuthi kahle futhi kahle kanjani isithombe sokuphrinta siboniswa kuphrinta yakho ye-laser. Iyunithi ehambelana nale nzuzo ngamachashazi we-dpi / okuhunyushwa nge-intshi. Lokhu kusebenza kuchazwa. Isixazululo siyisilinganiso esibalulekile uma ufuna ukuthenga iphrinta entsha ye-laser. Amachashazi ngamasentimitha akhombisa ukuthi ubuhle be-printouts kanye ne-1000 x 600 dpi akwanele ukuthi indlu isebenziswe ngephrinta yakho entsha ye-laser. Amaphrinta ombala we-laser namadivayisi we-monochrome afana nale nzuzo futhi futhi amahle okuqala okuqala avela kubakhiqizi abaziwayo, i-Canon, i-HP, i-Brother, i-Lexmark no-Ricoh ikulethela lezi zimiso ezinhle. Kunalokho, udinga ukuqaphela ukuthenga idivayisi ngezici eziningi ezengeziwe. Amafaksi, amaskena kanye nama-copiers kufanele athengwe lapha njengesethi ephelele, ngoba amanani ahlukile kancane kancane.
Isivinini sokuphrinta sashicileli entsha laser
Ama-18 amashidi ngomzuzu okuyigugu okufanele uwakhumbule uma uthuthukisa ihhovisi lakho lasekhaya ngephrinta laser. Bonke abakhiqizi bahlinzeka cishe ngaleli nani. Amadivaysi ambalwa kuphela we-monochrome ahlinzeka ngamagugu aphezulu bese uprinta ishidi le-20 ngomzuzu. Amakhasi we-18 akwanele futhi le nzuzo iphinde ixhomeke kumadokhumenti ofuna ukuwaphrinta ngephrinta yakho entsha ye-laser.
Ukuxhumana kwephrinta entsha ye-laser
Uma kuziwa ukuxhuma iphrinta ye-laser, kufanele futhi uphathe inkinga ye-AirPrint, ngoba yilokho ubuchwepheshe obusha i-Apple inikeza amakhasimende ayo. I-AirPrint ibhekisela kuwo wonke amadivayisi asebenzayo nge-iOS yesistimu yokusebenza. Lokhu kungokuxhuma wonke amadivaysi ekusetshenzisweni kwephrinta kwephrinta laser ngaphandle kwezintambo. Nakhu, nokho, uzothola iphrinta ye-laser engxenyeni engenhla yamanani futhi nabanye abakhiqizi banikeza izixazululo ezifanele ngaphandle kwezintambo. I-W-LAN, i-WiFi, i-Bluetooth, ubuchwepheshe be-infrared kanye nokuhlanganiswa kwe-Smartphones kunokwenzeka nabanye abakhiqizi futhi lawa baprinta laser bashibhile kakhulu ekuthengeni. Ngisho namanye amamodeli angena ezingeni linikeza lesi simiso. Futhi, lesi sici sibizwa nge-AirPrint, kodwa lezi zinhlelo zingabuye zixhunywe kumadivayisi we-Android. Ngakho unakho ukukhetha ukuqhubeka nekhebula ngephrinta laser bese usebenzisa ukuxhumana kwe-USB. Noma kunjalo, ungahlanganisa futhi iphrinta yakho ye-laser phakathi kwenethiwekhi ye-PC. Kunezinzuzo eziningi kakhulu futhi njengoba sekuvele kubonisiwe, uhlale uhlomele kahle lawa madivaysi kumbuso wakamuva wobuchwepheshe bokuxhumana. Ngaphezu kwalokho, abaningi balaba baphrinta bakusivumela ukuthi uthathe ukulawula phezu kwe-iPad noma i-smartphone futhi imingcele igcinwe kakhulu.
Amadivaysi amaningi ahlinzeka izinzuzo eziningi futhi lezi zinzuzo zihlanganisa umsebenzi wokuskena, ongavimbela ukusetshenziswa kwezikhukhula zephepha. Ngakho-ke amadokhumenti akho agciniwe futhi ungasebenzisa lo msebenzi wephrinta laser ukudala ingobo yomlando. Idivayisi eminingi esebenzayo njengamanje namanje imincane kakhulu imelelwe kulesilinganiso samanothi anikeziwe. Ngeshwa, kunezimbalwa ezimbalwa ezinkampanini zokuthenga, njengoba abakhiqizi abaziwayo basakwazi ukukhokha lesi sipho ngamanani aphezulu. Kodwa-ke, amadivaysi amaningi asebenzayo yiwona ongakhetha kahle esikhathini eside, njengoba uzobona ngokushesha izinzuzo ezibalulekile zokuskena, ukuthumela i-fax nokukopisha ukuthengwa okusha kwalolu divayisi. Ngakho ungayekethisi, kodwa kufanele ugcine ngokucacile isikhangiso engqondweni futhi uthenge kuphela lokho okudingayo ngempela.
Kuphi ukuthenga iphrinta laser ngokufanele?
Thatha kanye inani lephrinta evamile ye-inkjet kanye nezindleko ezihambelana nokuphrinta ngakunye kwekhasi. Lokhu kuthatha inani le-4,5 Cent ekhasini. Ngakolunye uhlangothi, ikhasi elinephrinta elihle laser libiza kuphela i-3 Cent. Ngaphezu kwalokho, kufanele ufake futhi uqhathanise amanani alinganiselwayo ezindleko zokuthenga ekubalweni. Ukubala kwakho njalo kufinyelela inzuzo ngaphezu kwesikhathi eside umshicileli we-laser enokwethenjelwa kakhulu, i-cartridges ye-inki engekho nayo ayinamathele futhi ulondoloza imali esikhathini eside nokunyathelisa okuningi. Isibonelo, izindleko zokuthenga eziphakeme nge-50% zingasungulwa ngokushesha uma wazi kahle ukuthi zingaki eziprintiwe ezizokwenziwa ngawe. Ikakhulukazi uma usebenzisa ihhovisi lakho lasekhaya ngokusemthethweni, ukuthengwa komshini omuhle we-laser yisinqumo esihle. Futhi, uthando lobuchwepheshe bamanje buyindlela yokuthenga iphrinta laser futhi lokhu kutshalwa kwephrinta entsha ye-laser kusuka engxenyeni ephakathi yobungako bamanani kuzohlale kukufanelekile.
Iphrinta ye-HP LaserJet Pro MFP M28a yokusebenza kwemisebenzi eminingi, isibonisi esimhlophe
Izici ezikhethekile: I-compact all-in-one mono laser printer ephrinta ngokushesha ehhovisi nasehhovisi lasekhaya; Ukusebenza ngephaneli yokulawula ye-LED; Auto on / off and instant on technology for more use, low low use
Ikhwalithi yokuprinta: kufika ku-600 x 600 dpi; Ukuxhumana: I-Hi-Speed ​​USB 2.0
Isivinini sokuphrinta: kufika ku-18 p./min (omnyama nomhlophe)
Isiqinisekiso sokukhiqiza: izinyanga ezingu-12 ezithengiswayo nokuthunyelwa yi-Amazon. Uma uthengisa futhi uthunyelwa ngumthengisi wesithathu, imininingwane yomdayisi osebenzayo iyasebenza
Yini esebhokisini: I-HP LaserJet Pro M28a Printer Mono Laser Multifunction Printer (W2G54A); I-HP 79 Black Original LaserJet Starter Toner Cartridge; Imiyalelo yokufaka; Izishayeli zesoftware nemibhalo ku-CD-ROM; ikhebuli yamandla
I-Bestseller cha. 2
Iphrinta ye-Brother HL-L2310D Compact B / W laser (amakhasi we-30 / amaminithi, i-A4, i-1.200x1.200 dpi yangempela, ukuphrinta okuphindwe kabili, i-250 ekhompyutheni yamaphepha amakhasethi, i-USB 2.0)
Compact B / W laser printer nge-othomathikhi Duplex ukuphrinta, kuhlanganise incwajana ukuphrinta umsebenzi, 250 ishidi iphepha ugqoko, dlula ugqoko, USB esibonakalayo 2.0
Isivinini sokuphrinta: Kufika kumakhasi we-30 / iminithi (i-simplex), kufika kumakhasi we-15 / iminithi (i-duplex)
Isinqumo sokuphrinta: 1.200 x 1.200 dpi
Iwaranti Yokukhiqiza: iminyaka ye-3. Imibandela yesiqinisekiso ingatholakala ngaphansi kokuthi "Imininingwane engaphezulu yezobuchwepheshe". Amalungelo wakho wewaranti esemthethweni ahlala engathinteki
Kufakwe ekulethweni: Iphrinta ye-laser kaMfowethu HL-L2310D Compact B / W
I-HP Colour LaserJet Pro M255dw Colour Laser Printer (Laser Printer, WLAN, LAN, Duplex, Airprint) inkomba emhlophe
Iphrinta ye-laser esheshayo futhi esebenza kahle ngeJetIntelligence nokuphrinta okuphindwe kabili, ukuphrinta nge-WLAN nenethiwekhi, i-Auto On / Off ne-Instant-On, I-Airpint, iWiFi-Direct, isikrini sokuthinta imibala, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi
Isivinini sokuphrinta: kufika ku-21 S./Min (ngombala futhi omnyama nomhlophe)
Ikhwalithi yokuphrinta: kufika ku-600 x 600 dpi; Ukuxhumeka: I-Hi-Speed ​​USB 2.0, Ethernet, i-WiFi, ukunyatheliswa kwefoni
Iwaranti Yokukhiqiza: iminyaka emithathu iwaranti uma ubhalisa kungakapheli izinsuku ezingama-3 zokuthenga
Ububanzi bokulethwa: I-HP Colour LaserJet Pro M255dw color laser printer (7KW64A); IHP 207A LaserJet Toner Cartridges (CMYK); Imiyalo yokufaka; Intambo yamandla; Intambo ye-USB
Iphrinta ye-HP Laser 107w laser (iphrinta ye-A4, iWiFi, i-USB)
Iphrinta ye-laser esheshayo futhi esebenza kahle ngokuphrinta kwe-mono, iphrinta nge-WLAN, ngenxa yobukhulu bayo obulinganayo obulungele izindawo ezincane zomsebenzi; Ukuphrinta okulula kweselula usebenzisa uhlelo lokusebenza lwe-HP Smart
Isivinini sokuphrinta: kufika ku-20 p./min (omnyama nomhlophe)
Ikhwalithi yokuphrinta: kufika ku-1200 x 1200 dpi; Ukuxhumeka: I-Hi-Speed ​​USB 2.0, i-WiFi, ukuphrinta kweselula
Amaphuzu avelele: Iphaneli yokulawula ye-LED, ugqoko lokukhipha ishidi le-100, auto on / off, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi
Ububanzi bokulethwa: I-HP Laser 107w printa ye-laser (4ZB78A); kufakwe kuqala ama-cartridge we-HP 106A LaserJet toner; Umhlahlandlela wokuqalisa osheshayo; Iphosta yokufaka; Intambo yamandla, ikhebula le-USB
Iphrinta ye-HP Colour Laser 178nwg ephrinta ukusebenza kwe-laser ephrinta (iphrinta, isithwebuli, okopisha, i-WLAN, i-airprint) isibonisi
Izici ezikhethekile: iphrinta ye-laser yokusebenzisa imibala enama-3-in-1, isiphrinta esinethiwekhi esheshayo ne-WLAN, HP ePrint, ne-Apple Airprint
Ijubane lokuphrinta: kufika ku-18 ppm (mnyama nokumhlophe); kufika ku-4 ppm (ngombala)
Amaphuzu avelele: Iphaneli yokulawula ye-LCD, ugqoko wokukhipha enezinto eziyi-50, auto on / off, A4 flatbed scanner, low usegesi
Ububanzi bokulethwa: I-HP Colour Laser 178nwg MFP color laser printer (4ZB96A); ukufakwa ngaphambili kwama-carter we-LaserJet toner (CMYK); Umhlahlandlela wokuqalisa osheshayo; Isethaphu Iphosta; Intambo yamandla, ikhebula le-USB
I-monxer ye-Lexmark B2236DW (WLAN, LAN, ifinyelela ku-34 S./Min., Isibonisi sokuphrinta esizenzekelayo)
I-Lexmark B2236dw ecwebile, ene-compact, enikeza amakhasi afinyelela ku-34 ngomzuzu * ngokubamnyama nokumhlophe kanye ne-Wi-Fi ejwayelekile nokuphrinta okunamacala amabili.
Iprosesa ye-1 GHz eyimbili-core kanye nememori ye-256 MB ivumela ukuphrinta kuze kufike kumakhasi we-34 / min. *
Uhlaka lwensimbi nokwakhiwa okuqinile komsebenzi osindayo nezindawo ezinobunzima.
Ukuxhumana okulula nge-Ethernet, i-USB, i-WLAN noma izinketho zokuphrinta okulula kweSelula.
I-1 yangaphambi kokushintshana ngosuku olulandelayo lwebhizinisi
Iphrinta ye-HP Laser 135wg ye-laser yokusebenzisa imisebenzi eminingi (iphrinta ye-laser, okopisha, isithwebuli, i-WLAN)
Izici ezikhethekile: Iphrinta ye-mono-laser ye-mono-laser eyodwa ephrinta ngokushesha kanye ne-WiFi yehhovisi kanye nehhovisi lasekhaya; Ukusebenza ngephaneli yokulawula ye-LCD; Yenza i-Auto / icime ukuze isebenze kahle, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi
Amaphuzu avelele: Iphaneli yokulawula ye-LCD, ugqoko wokukhipha enezinto eziyi-100, auto on / off, A4 flatbed scanner, low usegesi
Ububanzi bokulethwa: I-HP Laser 135wg iphrinta ye-multifunction laser (6HU11A); ukufakwa ngaphambili kwama-carter we-LaserJet toner; Umhlahlandlela wokuqalisa osheshayo; Isethaphu Iphosta; Intambo yamandla, ikhebula le-USB
Isiphrinta se-HP LaserJet Pro M118dw laser (printer omnyama nomhlophe, i-WiFi, i-AirPrint) inkomba emhlophe
Izici ezikhethekile: amaphrinta we-laser amnyama namhlophe aphumelela ngokushesha nangobuchwepheshe beJetIntelligence ne-WiFi, alungele izindawo ezisehhovisi
Izici: I-Auto On / Off ne-Instant On, i-HP ePrint, i-Apple AirPint, i-Gooogle Cloud Phrinta, i-Wireless Direct, Inkinobho ye-LED, Ukuphrinta kwe-Duplex Okuzenzakalelayo, Ukusetshenziswa Okuphansi Kwamandla
Isivinini sokuphrinta: kufika ku-28 p./min (omnyama nomhlophe)
Ikhwalithi yokuphrinta: kufika ku-1.200 x 1.200 dpi; Ukuxhumana: I-Hi-Speed ​​USB 2.0, iWiFi, Inethiwekhi, i-Apple AirPrint, i-Google Cloud Phrinta, Ukuphrinta kweselula, Ukushayela kwe-WIFi
Yini esebhokisini: HP LaserJet Pro M118dw Black and White Laser Printer (4PA39A); I-HP 94 Black Original LaserJet Starter Toner Cartridge; Imiyalelo yokufaka; Izishayeli zesoftware nemibhalo ku-CD-ROM; ikhebuli yamandla
I-monxer ye-Lexmark B2338DW (WLAN, LAN, ifinyelela ku-36 S./Min., Isibonisi sokuphrinta esizenzekelayo)
I-Lexmark B2338dw ihlaba umxhwele ngengcebo yemisebenzi futhi inikezela ngenani elivelele lokuphrinta kwe-monochrome ezindaweni zokusebenzela ezincane - ngokuprinta okujwayelekile okunamacala amabili, imisebenzi yezokuphepha eyandisiwe nokwakhiwa okuhlala isikhathi eside. Iprosesa elingumgogodla elihlukahlukene lisekela ukuphuma kwamakhasi afinyelela kwangama-36 ngomzuzu *, kanti izakhi zephrinta ezihlala isikhathi eside zinciphisa isikhathi esiphansi. Ungayixhuma nge-USB ejwayelekile, i-Gigabit Ethernet noma ngemodyuli ye-WLAN.
Ungaphatha futhi amavolumu aphezulu wokuphrinta nge-processor enamandla engu-1 GHz eyimbili-core processor, 512 MB RAM module ejwayelekile ye-WLAN
Isiqinisekiso seminyaka ye-4 sisebenza kuphela ngokubhalisa komkhiqizo ezinsukwini ze-90 kusukela ngosuku lokuthenga
Uhlelo lokuvikela isimo sezulu lwe-Kyocera i-Ecosys P2040dn laser printer: abamnyama nabamhlophe, abayiziphinda-phinda, amakhasi angama-40 ngomzuzu. Faka phakathi. Isibonisi somsebenzi wokuphrinta weselula
Esinokwethenjelwa: Iphrinta ye-Ecosys P2040dn emnyama nomhlophe nge-duplex unit prints kuze kufike kumakhasi angama-40 A4 ngomzuzu futhi ilungele ukusetshenziswa ekhaya, ehhovisi noma emsebenzini
Imvelo enobungane: uhlelo lokuvikela isimo sezulu = ukuphrinta nokukopisha okunobungani besimo sezulu. Imininingwane engaphezulu yohlelo lokuvikela isimo sezulu lwe-Kyocera lungatholakala ngaphansi kwegama lokuphrinta le-Kyocera esipheqululini sakho
Ngempumelelo: Ngokuxazululwa kwe-1200 dpi, iphrinta elonga i-laser likhipha imiphumela yokuphrinta ecijile. Umsebenzi "wokuthula" unika amandla ukuphrinta okuthule
Isikhathi Eside: Iziphrinta zenziwa ngezinto ezisezingeni eliphakeme ezinempilo ende kakhulu yenkonzo futhi zenzelwe ukusetshenziswa ezindaweni zebhizinisi
Okusebenzayo: Izithombe namadokhumenti kungaphrintwa noma kuskthwe kusuka ku-smartphone ngeSprinta Phrinta App se-iOS ne-Android. I-AirPrint ne-Google Cloud Phrinta ziyasekelwa